Bred Camembert na Red Currant Sauce | Di na Nwunye Maka Uzo
Camembert bụ chiiz mmiri ara ehi na-acha agba nke nwere udiri udiri ya na Brie (chiiz ọzọ enwere ike iji ya mee ya.
Anyị hụrụ ụzọ ọgaranya ụtọ na udiri nke Camembert guzobere na obere ụtọ ma tart acidity nke uhie currant ma ọ bụ ụma ojii currant na-echekwa. Ihe nchekwa German bụ nke pụrụ iche ma nwee ọhụụ. Nwere ike iji akara ọ bụla ma nwalee udiri ụtọ nke nhọrọ gị, dịka ngwakọta raspe-red currant, cherry ojii, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-atọ ụtọ.
Camembert na-abakarị na gburugburu 4.5-ounce, ma ị nwere ike jee ozi otu nnọkọ otu ọbịa, ma ọ bụ wedaa nke ọ bụla n'ime wedge. N'iji dollop nke nchekwa na obere pasili, ndị a na -eme nri mkpịsị aka kacha mma maka oriri abalị ma ọ bụ nnabata mmanya. Naanị ibelata okirikiri ahụ n'ime wedges tupu ịmalite ịme nri wee sorozie Ntụziaka ahụ. Ọ bụkwa nhọrọ dị oke mma maka oge ọgbụgba dị iche iche dịka Motherbọchị Ndị nne ma ọ bụ ngụsị akwụkwọ.
Oge Nkwadebe15 mins
Ọrụ: 4 ndị mmadụ
4 gbaa Camembert chiiz 4.5 ounces ọ bụla
2 iko ntụ ọka
2 akwa buru ibu
1 / 2 Iko mmiri ara ehi dum
2 iko achịcha larịị
2 tablespoons bọta nke a na-agwaghị agwa
8 ounces German red currant na-echekwa
pasili maka garnish
Ngwurugwu na-ekpo ọkụ na nrịgo 450 F.
Debe ntụ ọka ahụ na efere a na-emighị emi. Na efere nke abụọ na-emighị emi, pịa akwa na mmiri ara ehi iji mepụta eggwash. Tinye achịcha crumbs na efere nke atọ emighị emi.
Dredge akpa agba nke Camembert na ntụ ọka ahụ ma mee ka ụfọdụ kpuchie ya.
Wepu Camembert ma hichapu ahihia nile.
Debe floured gburugburu n'ime eggwash. Kpuchie ya na akwa.
Wepu Camembert site na eggwash, jiri nwayọ wepu ya iji wepu ihe ọ bụla, tinye ya na nnukwu efere ahụ nwere achịcha achịcha.
Kpuchie okirikiri ahụ ke achịcha, wee wepụ ya na efere ahụ, na-akụ chiiz ahụ iji wepu bred ahụ niile.
Tinyegharịa usoro ahụ na gburugburu ka ọ wee nwee okpukpu abụọ, ma kwughachi usoro ahụ ndị ọzọ metụtara Camembert.
Debe achịcha ndị ị na-agbanye n'ọkụ na friji ka ị na-edozi pan maka sautéing. Ọ dị mkpa na ị ga - emegharị ọsọ ọsọ, ebe ọ bụ na ịchọghị ka achịcha na - esi nweta soggy.
Agbazekwa mmanụ mmanụ butter na bọta na sauté na-ajụ elu maka nnukwu ọkụ. Wepu akpa Camembert gburugburu site na friji ma tinye ya na sauté pan na-ekpo ọkụ.
Sauté ya n'akụkụ ọ bụla ruo mgbe aja aja na-acha aja aja, ihe dị ka nkeji 1 n'akụkụ ọ bụla. Megharia usoro a na mpaghara ndị ọzọ.
Debe okirikiri ahụ n'ime ite i ghere eghe ma sie nri ruo mgbe Camembert gharịị, 5 ruo nkeji 7.
Ka ọ dị ugbua, dobe ihe nchekwa n'ime obere sauté na-ekpo ọkụ ma kpoo nnukwu ọkụ.
Debe okirikiri na efere ọ bụla. Jupụta ọkụ na-echekwa n’elu efere n’akụkụ Camembert a na-eme achịcha.
Mee ndozi n’elu nke ọ bụla na pasili ma jee ozi ozugbo.
Category: Appetizer, Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, France, Ezi ntụziaka Tags: Camembert, chiiz, France, french, Ezi ntụziaka
← Etu aga emefu ụbọchị 1 na Copenhagen
Paella Omuma →